ENWEGHỊ IKE ỊGBA ỌSỌ NGWA A NA PC GỊ - OTU ESI EDOZI - WINDOWS - 2019
Enweghị ike ịgba ọsọ ngwa a na PC gị - otu esi edozi
Ụfọdụ ndị ọrụ nke Windows 10 nwere ike ịchọta ozi njehie "Ọ gaghị ekwe omume ịmalite ngwa a na PC gị. Ịchọta nsụgharị maka kọmputa gị, kpọtụrụ onye bipụtara ngwa ahụ na bọtịnụ" Close ". Maka onye ọrụ novice, ihe kpatara ihe omume ahụ anaghị amalite site na ozi dị otú ahụ ga-edoghị anya.
Akwụkwọ ntuziaka a kọwara n'ụzọ doro anya ihe kpatara na ọ gaghị ekwe omume ịmalite ngwa ahụ na otu esi edozi ya, yana ụfọdụ nhọrọ ndị ọzọ maka otu njehie ahụ, yana vidiyo na nkọwa. Hụkwa: A na-akpọchi ngwa a maka ihe nchebe mgbe ị na-amalite usoro ma ọ bụ egwuregwu.
Ihe mere na ọ gaghị ekwe omume ịmalite ngwa ahụ na Windows 10
Ọ bụrụ na ịmalite usoro ma ọ bụ egwuregwu na Windows 10, ị hụ kpọmkwem ozi gosiri na ọ gaghị ekwe omume ịmalite ngwa ahụ na PC gị, ihe kachasị kpatara ya bụ.
I nwere ụdị 32-bit nke Windows 10 arụnyere, ọ dịkwa gị mkpa 64-bit iji mee ihe omume ahụ.
E mepụtara usoro ihe a maka ụfọdụ nsụgharị ochie nke Windows, dịka ọmụmaatụ, XP.
Nhọrọ ndị ọzọ ga-ekwe omume, nke a ga-atụle na ngalaba ikpeazụ nke akwụkwọ ntuziaka ahụ.
N'okwu mbụ, ihe niile dị nnọọ mfe (ọ bụrụ na ị maghị ngwaọrụ 32-bit ma ọ bụ 64-bit na kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ, lee otú ị ga-esi mara ikikere Windows 10): ụfọdụ mmemme nwere faịlụ abụọ a na-arụ ọrụ na folda: otu na mgbakwunye nke x64 na aha nke ọzọ na-enweghị (n'iji usoro ihe omume amalite), mgbe ụfọdụ, a na-egosipụta nsụgharị abụọ nke usoro ihe omume ahụ (32 bits ma ọ bụ x86, nke dị otu 64-bit ma ọ bụ x64) dịka nbudata abụọ dị iche iche na ebe nrụọrụ weebụ onye mmepụta (na nke a, budata usoro ihe omume ahụ maka x86).
N'okwu nke abụọ, ị nwere ike ịnwa ilele ebe nrụọrụ weebụ nke usoro ihe omume ahụ, ma ọ bụrụ na e nwere nsụgharị jikọtara na Windows 10. Ọ bụrụ na emeliteghị ihe omume a ruo ogologo oge, gbalịa mee ya na ọnọdụ nkwalite na nsụgharị OS nke mbụ, maka nke a
Pịa aka nri na faịlụ mmemme nke usoro ihe omume ahụ ma ọ bụ na ụzọ mkpirisi ya wee họrọ "Njirimara". Rịba ama: nke a agaghị arụ ọrụ na ụzọ mkpirisi na ngalaba ọrụ, ma ọ bụrụ na ị nwere ụzọ dị mkpirikpi n'ebe ahụ, ịnwere ike ime nke a: chọta otu usoro ahụ na listi na Malite menu, pịa aka na ya ma họrọ "Di elu" - "Gaa na ebe faịlụ". Ugbua i nwere ike igbanwe ihe onwunwe nke uzo ngwa ngwa.
Na Mkpokọta taabụ, lelee "Usoro mmemme na ọnọdụ ndakọrịta" ma họrọ otu n'ime nsụgharị ndị dị na mbụ nke Windows. More: Windows 10 ndakọrịta ọnọdụ.
N'okpuru ebe a bụ nkuzi vidiyo banyere otu esi edozie nsogbu ahụ.
Dị ka usoro, ihe ndị a zuru ezu iji dozie nsogbu ahụ, ma ọ bụghị mgbe niile.
Ụzọ ndị ọzọ iji dozie nsogbu ahụ na ngwa ngwa na Windows 10
Ọ bụrụ na ọ nweghị ụzọ enyere aka, ozi ndị ọzọ na-esonụ ga-aba uru:
Gbalịa mee ihe omume ahụ na nnọchite onye nchịkwa ahụ (pịa nri faịlụ ma ọ bụ ụzọ mkpirisi - mmalite dịka nchịkwa).
Mgbe ụfọdụ, nsogbu nwere ike ịbụ nsogbu site na njehie nke onye mmepụta - gbalịa usoro ochie ma ọ bụ nke ọhụrụ nke usoro ihe omume ahụ.
Lelee kọmputa gị maka malware (ha nwere ike igbochi nkedo nke ụfọdụ ngwanrọ), lee Ngwa kacha mma maka wepu malware.
Ọ bụrụ na ngwa ngwa Windows 10 na-arụ ọrụ, mana ebudataghị na ụlọ ahịa ahụ (mana site na saịtị ndị ọzọ), ntụziaka ahụ kwesịrị inyere aka: Otu esi arụnye .Appx na .AppxBundle na Windows 10.
Na nsụgharị nke Windows 10 n'ihu Onye Mmepụta Mmelite, ị nwere ike ịhụ ozi na-ekwu na apụghị ịmalite ngwa ahụ n'ihi na njikwa akaụntụ njikwa (UAC) nwere nkwarụ. Ọ bụrụ na ị zutere ụdị njehie ahụ, ị ​​ga-amalite ngwa ahụ, mee ka UAC, hụ Windows 10 Njikwa Akaụntụ Aka (ntụziaka na-akọwa disabling, ma ị nwere ike ịme ya na ntụgharị usoro).
Enwere m olileanya na otu n'ime nhọrọ a tụrụ aro ga-enyere gị aka dozie nsogbu ahụ na "ọ gaghị ekwe omume ịmalite ngwa a." Ọ bụrụ na ọ bụghị - kọwaa ọnọdụ na ihe ndị a, m ga-anwa inyere aka.